University of Alberta - Waxbarashada sare ee Kanada. Study dibadda
gaabinta : E ee A
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Alberta
Qor at University of Alberta
University of Alberta waa Top a 5 jaamacadda Canadian iyo mid ka mid ah Top ah 100 adduunka, guriga in ka badan 500 barnaamijyada ka qalin jabiyay, 200 Barnaamijyada undergraduate iyo 450 kooxo arday firfircoon.
ayuu University of Alberta ayaa lahaa aragti ah in ay noqon mid ka mid ah jaamacadaha weyn dunida ee wanaaga dadweynaha tan iyo markii la aasaasay. Jaamacadda Tani waxaa ka go'an in yabooha Madaxweynaha aasaasay Henry Marshall Tory dhigay in "... Aqoon ma jiri doono walaac ka mid ah culimada oo keliya. halmaaami dadka oo dhan u noqon doonaan in ay gool final. "
Muuqaalkani waxa uu waartaa sidii jaamacadda u dadaalay si loo horumariyo nolosha dadka ee Alberta, guud ahaan Canada, iyo adduunka oo dhan.
dhiga Jaamacadda, wax kasta oo runta, macnihiisu waa "wax alla wixii wax waa run" iyo waxa laga soo qaatay ee Warqadda St. Paul in Philippians ah, Cutubka 4, Verse 8, in version Latin Vulgate Kitaabka Quduuska ah.
Muddo jawi waxbarasho oo firfircoon oo taageero, Jaamacadda Alberta ogaada, faafiya, iyo khuseysaa aqoonta cusub ee waxbarid iyo waxbarasho, cilmi-baarista iyo hawlaha hal abuur leh, ka qaybgalka bulshada, iyo iskaashi. The U of A siinayaa in ay hal-abuurnimo cod qaranka iyo kuwa caalamiga ah ee our gobolka, qaadashada door hogaanka ku gelinayn Kanada safka hore ee caalamka.
Si loo Waxyoodo ahayn ruuxa aadanaha iyada oo loo marayo guulaha fiican ee waxbarasho, daahfurka, iyo jinsiyada ee bulshada ka mid ah hal abuur leh, dhismaha mid ka mid ah jaamacadaha weyn dunida ee wanaaga dadweynaha.
The University of Alberta qiray territory dhaqanka ku saabsan oo aan ka taaganahay iyo mahad dadyowga Indigenous kala duwan oo raadkoodii ayaa calaamadeeyay dhulka this qarniyo, sida: Kirii, Saulteaux, Blackfoot, Meetis, Nakota Sioux.
– Eeg dheeraad ah: https://uofa.ualberta.ca/about/facts#sthash.cSUw49fI.dpuf
Beeraha, Life Sciences iyo Environmental
Beeraha Cuntada iyo Nafaqada Science
Forest Science iyo Maareynta, Alberta School of
Resources la cusboonaysiin karo
Resource dhaqaalaha iyo Environmental Sociology
Accounting, Hawlgallada iyo Systems Information
Maaliyadda iyo Falanqaynta tirokoobka
Suuq-, dhaqaalaha Ganacsiga, iyo Sharciga
Strategic Management iyo Ururka
Ingiriisi iyo Studies Film
Taariikhda iyo Classics
Luqadaha Modern iyo Studies Cultural
Haweenka iyo Studies Gender
Daraasaadka Siyaasadda Waxbarashada
Library iyo Information Studies, School of
Kiimikada iyo Qalabka Engineering
Engineering Civil iyo Environmental
School Macdanta iyo Batroolka Engineering
School Luqadda Ingiriisiga
Master of Arts in Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda
Studies Graduate iyo Research
Medicine & Ilkaha
Anesthesiology iyo Xanuun Medicine
Ilkaha iyo ilkaha Nadaafadda
Daawo Xaaladda Degdegga ah
Laboratory Medicine iyo Pathology
Medical ayidhi iyo immunology
Dhalmada iyo dumarka
Raajada iyo Baarista sawirka
Farmashiyaha iyo Pharmaceutical Sciences
Waxbarashada Jirdhiska iyo Madadaalada
Isgaarsiinta Sciences iyo Xanuunada
MSc ee Caafimaadka Dadweynaha
Hawada Sciences Earth iyo
Xisaabeed iyo tirokoobka Sciences
St. Yuusuf College
St. Stephen ee College
The University of Alberta, hal a, Jaamacadda gobolka dadweynaha, waxaa u kiraysnaa in 1906 ee Edmonton, Alberta Xeerka University ee Kalfadhiga koowaad ee Golaha cusub ee Sharci-dejinta, iyadoo Premier Alexander C. Rutherford sida ay kafaala. Jaamacadda waxaa qaabeeyey jaamacadaha gobolka American, iyadoo culayskana la saarayo shaqo dheeraad ah iyo cilmi dhaqmo. maamul ayaa waxaa qaabeeyey University Ontario ee Xeerka Toronto ee 1906: nidaam laba aqal oo ka kooban golaha guurtida a (awood) masuul ka ah siyaasadda tacliinta, iyo guddiga ka mid ah taliyayaasha (muwaadiniinta) xakamaynta siyaasadda dhaqaalaha iyo lahayd amar rasmi ah in dhammaan arrimaha kale. Madaxweynaha, magacaabay guddiga, waxay ahayd in ay bixiyaan xiriir ka dhexeeyo labada oo uu ku sameeyo hoggaanka hay'adaha.
ehelu naarka kulul ka dhacay inta u dhaxaysa magaalooyinka dalka Calgary iyo Edmonton ka badan meesha uu caasimadda gobolka iyo Jaamacadda. Waxaa la sheegay in magaalada Muqdisho uu noqon doono waqooyiga of North webiga Saskatchewan iyo in jaamacadda noqon lahaa magaalo koonfurta waxaa ka mid ah. Magaalada Edmonton noqday caasimadda iyo magaalada markaas-gooni ah oo Strathcona on bangiga koonfureed ee webiga, halkaas oo Premier Alexander Rutherford noolaa, la siiyey jaamacadda. Markii ay labada magaalo ayaa soo fujiyo in 1912, Edmonton noqday labada caasimada siyaasadeed iyo tacliinta.
Iyadoo Henry Marshall Tory sida ay Madaxweynaha ugu horeysay, Jaamacadda Alberta bilaabay hawlgal ee 1908. Shan iyo afartan ardayda ka qeyb galay fasalada in English, xisaabta iyo luuqadaha casriga ah, dabaqa sare ee Dugsiga Hoose ee Queen Alexandra in Strathcona, halka dhismaha campus ugu horeysay, Athabasca Hall, hoos dhismaha ahaa. Waraaq uu u Alexander Cameron Rutherford horaanta 1906, markii uu joogay geeddi-socodka samaynta McGill University College ee Vancouver, Tory qoray, “Haddii aad qaadato wax tallaabo jihada of University a shaqeeya oo aad rabtid in aad ka fogaato khaladaadka ee la soo dhaafay, qaladaad kaas oo ay leeyihiin hay'adaha kale si cabsi naafada, waa in aad bilowdo ku salaysan wax bara.”
Under hanuunka Tory ee, sanadaha hore ayaa la calaamadeeyay by qorista Professor iyo dhismaha oo ka mid ah dhismayaasha campus ugu horeysay. Percy Erskine Nobbs & Frank Darling loogu talagalay qorshaha ee University of Alberta ee 1909-10. Nobbs loogu talagalay Dhismaha Arts ah (1914-15), laboratories iyo Power House (1914). Iyada oo Cecil S. Burgess, Nobbs loogu talagalay College ee gobolka of Medicine (1920-21). Naqshada Herbert Alton Magoon loogu talagalay dhismayaasha dhowr on campus, ay ka mid yihiin St. Stephen ee Methodist College (1910) iyo deganaansho ee professor Rupert C. Lodge (1913).
The University of Alberta abaal darajo ee ugu horeysay ee 1912, isla sanadkaas waxa aasaasay Waaxda Extension. The Kuliyada Daawada waxaa la aasaasay sanadka soo socda, iyo Kuliyadda Beeraha bilaabay in 1915. Laakiin oo ay la socdaan kuwaas Dhacdooyin hore yimid War World First iyo faafa ee hargabka caalamiga ah ee 1918, kuwaas oo toll on jaamacadda keentay in ganaax labo bilood ah fasalada dayrta ee 1918. Inkastoo dhac kuwan, Jaamacada sii kordheyso. by 1920, oo waxay lahayd lix kulliyadood (Arts oo Sciences, Science Applied, Beeraha, Medicine, Ilkaha, iyo Sharciga) iyo labo dugsi (Farmashiyaha iyo Xisaabaadka). Waxaa abaal kala duwan oo ka mid ah degrees: Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science (BSc), Bachelor of Science in Beeraha (BSA), Bachelor of Sharciyada (LLB), Bachelor of Farmashiyaha (PhmB), Bachelor of Ilaahnimada (BD), Master of Arts (MA), Master of Science (MSc), iyo Doctor sharciyada (LLD). Waxaa jiray 851 ardayda lab iyo 251 ardayda dhaddig, iyo 171 shaqaalaha tacliinta, lugu daro 14 haweenka.
The ku dhagra Ciidda Breton ayaa waxaa la aasaasay at kuliyadda beeraha ka 1929 - joogo si ay u bixiyaan cilmi beeraha on unugyada labka iyo dheddiga, isticmaalka, meerto dalagga iyo ku dhaqanka beeraha on carradu Gray-Luvisolic (Gray-kaymaha), taas oo dabooli gobollada badan ee galbeedka Canada.
Guddiga Memorial War The wakiishay a War Memorial tuuboyinka Organ in la dhisay by Frères Casavant ee U of A unkay Hall ee 1925 in xusuustiisa 80 University of Alberta saaxiibo kan bixiyey noloshooda intii lagu jiray Dagaalkii Weyn.
In qaybta hore ee qarnigii 20-, waxbarasho xirfadeed balaariyay ka baxsan beeraha dhaqanka ee fiqiga, sharciga iyo daawo. tababarka Graduate ku salaysan model-u waxyoonay Jarmal American ee shaqada koorsada khaas ah iyo dhamaystirka sha cilmi ah la soo bandhigay. In 1929, jaamacadda la aasaasay College a of Education. Tani waxay muddo koritaanka ahaa in ay muddo kooban ah, in kastoo, sida Depression Great iyo dagaalkii labaad ee adduunka carqaladeeyey diiwaangelinta iyo ballaarinta ilaa 1945. Jaamacadda ayaa sidoo kale helay awoodaha cusub dadweynaha. In 1928, guurtida jaamacadda ee la siiyey awood u leeyahay inuu dusha iyo magacaabi nus ka mid ah Guddiga Eugenics Alberta ah, lagu eedeeyay shaqsiyaad ku talineyso in lagu nadiifiyo.
Ku dhiira galiyay by koritaanka guudahaan dadka ardayga iyo helitaanka shidaal Leduc in 1947, Jaamacadda Alberta maray ballaarinta marayo 1950 in sii marayo 1960 sida jiilka ilmaha-kaca ah ayan bararin safafka diiwaangelinta. Labadan sano ee sidoo kale arkay ballaarinta dhismayaasha campus, oo ay ku jiraan dhismayaal cusub oo Caqlina waxbarashada jirdhiska iyo waxbarashada, iyo Library Cameron ah. The University of Alberta Press, xoogga on taariikhda Canadian galbeedka, sayniska guud iyo ecology, waxaa la aasaasay bishii 1969.
siyaasadda waxbarashada jaamacadda bilaabay 1960 jawaabay cadaadiska dadweynaha oo aaminsan in waxbarashada sare ahaa furaha ah inay cadaalada bulshada iyo wax soo saarka dhaqaale ee shakhsiyaadka iyo bulshada. Intaa waxaa dheer, siyaasad-hal jaamacad ee West ku beddelmay sidii kulliyadaha jira oo ka mid ah jaamacadaha gobolka helay hoosaad sida jaamacadaha. On September 19, 1960, jaamacadda la furay campus ah 130-hektar cusub ee Calgary. by 1966, Jaamacadda Calgary ayaa loo aasaasay sidii hay'ad madaxbannaan.
Laga soo bilaabo bartamihii 1970-ilaa 1980, Jaamacada riyaaqay kobaca joogto ah. In 1970, Kuliyadda Saint-Jean bilaabay bixiya barashada af-Faransiis farshaxanka, sayniska iyo waxbarashada. In 1984, Dugsiga Studies Native la aasaasay. Dhismayaasha in la bilaabay 1960, sida Biological Sciences iyo Dhexe Dhismaha Academic, lagu soo gabagabeeyey 1970. dayactir balaaran celiyey qadariyo Arts Building, iyo sidoo kale hoolalka Athabasca iyo Pembina. dhismayaasha New dhameeyey 1980 waxaa ka mid ahaa Dhismaha Ganacsiga iyo wajiga hore ee Walter C ah. Xarunta Sciences Health Mackenzie. dhismaha kale oo cusub, ee kala Universiade Pavilion (naaneeso “Butterdome”), ayaa lagu soo gabagabeeyey oo qayb ka ah diyaarinta jaamacadda uu marti geliyo ciyaaraha University adduunka ee 1983, markii ugu horeysay ee ay dhacdo lagu qabtay North America.
1990 waxa ay ahaayeen waqti ka mid ah caqabadda dhaqaale sida dowladda Alberta ka dhigay wayday, miisaaniyadda. laakiin waxay sidoo kale ahaayeen waqti ah oo jaamacad ka taageero qabeen faa'iideystey. Xarunta $ 11-million Timms ee Arts ah, kaas oo bilaabay dhismaha 1993, waxaa suurto by deeq u badan oo ka samigiisa, Albert Timms. In 1998, Gladys Young ayaa $ 3.5-milyan oo deeq inay fund undergraduate jaamacadda deeqda waxbarasho ee xasuusta of Roland Young, kuwaas oo ka U of A ee ka qalin jabiyay 1928, ahaa deeqda ugu weyn ee gaarka loo leeyahay deeqda undergraduate taariikhda jaamacadda ee.
The 2000 hore u keeneen deeq-koror lixaad leh. qiimaha tamarta High eryay kaca tamarta Alberta ee keentay in Bah dowladda Balaayiin Dollar ah iyo abuurista xiga ee a $4.5 billion hibeynta waxbarashada post-sare ee gobolka. In 2005, Jaamacada kiraystay Indira Samarasekera sida ay madaxweynaha 12-kii, bilaabin qorshe cusub oo lagu laftiisa dhiso sida mid ka mid ah jaamacadaha ugu sareeya cilmi dadweynaha dunida ee. Qorshayaashaasi ayaa caqabad ku ah 2008 u dhac dhaqaalaha, iyo dabayaaqadii March 2008, hibeynta jaamacadda ayaa waxaa xajmi ka badan $100 million, ku dhowaad 14 boqolkiiba miraheeda. Jaamacadda saadaaliyey ah $ 59-milyan oo dhac miisaaniyadda ee 2009 ka hor inta jeexan gobolka keenay tiradaasi in si $79 million. Si aad u yareyso farqiga miisaaniyadda, Jaamacada kordhay ajuurada non-tacliimeed by $290 sannadkii la dhigay off shaqaalaha barista iyo taageerada, iyo xataa reebay telefoonada ee waaxaha qaar ka mid ah (sida English iyo Film Studies).
The 2013 Miisaaniyadda Alberta jaray deeqaha post-sare ee gobolka by $147 million, oo ay ku jiraan a 7.2 boqolkiiba xanaaqeen deeqda hawlgalka saldhig jaamacadda ee. Jaamacadda waxaa daboolaya ay dhac keentay iyadoo la yaraynayo kharashka guud ee 2013 by $28 million, markaas jarida dheeraad ah $56 million si la isugu dheellitiro miisaaniyadda by guga ee 2015.
On April 26, koox waxbarasho ee ardayda iyo macalimiinta oo ka tirsan jaamacadda Alberta ah u yimid inuu soo booqdo BNU-HKBU United International College oo ka qeyb qaatay barnaamij waxbarasho oo muddo gaaban ah oo socday laba Isbuuc ka.
The 2015 Miisaaniyadda Alberta sii daayay bishii October 2015 soo celiyo ah 1.4 boqolkiiba xanaaqeen ah U maaliyad hawl-A ee, oo loogu talagalay oo dheeraad ah u kordhay laba boqolkiiba ee 2015-16 sannad-maaliyadeedka. Miisaaniyadda ayaa sidoo kale ka mid ahaa xanibay waxbarashada laba-sano. October sidoo kale arkay furitaanka ee geedi socodka qorshaynta istaraatiijiga ah hay'adaha loogu talo galay inay keento dood iyo soo ururin-celin on mudnaanta istiraatiiji ah jaamacadda ee, iyadoo himiladu tahay in loo maleeyo in kaalintooda hogaamineed qaranka ee waxbarashada dugsiga sare kadib.
Ma rabtaa wada hadlaan University of Alberta ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: University of Alberta rasmiga ah Facebook
University of dib u eegista Alberta
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Alberta.